Digital Content Production: Gịnị bụ Ọgwụgwụ Ngwaahịa? | Martech Zone
Kedu ka ị si akọwapụta ọgwụgwụ ngwaahịa nke mmepụta ọdịnaya gị? M na-agbasi mgba ike banyere echiche ndị ahịa banyere mmepụta ọdịnaya dijitalụ. Lee ụfọdụ ihe m gara n'ihu ịnụ:
Anyị chọrọ ịmepụta ọ dịkarịa ala otu blog post kwa ụbọchị.
Anyi choro ka 15% bawanye onu ogugu akwukwo n’iile.
Anyị chọrọ ka 20% na-ebute ndu kwa ọnwa.
Anyị chọrọ okpukpu abụọ anyị na-esote n'ịntanetị n'afọ a.
Azịza ndị a bụ ntakịrị ihe nkoropụ n'ihi na metric ọ bụla bụ a akpụ akpụ metrik. Usoro metrik ọ bụla dị n'elu nwere olu, ogologo oge metụtara ya, yana ịdabere na enweghị ike ịchịkwa mgbanwe na mpụga nke njikwa marketer.
Daily blog posts equate to an end product, ọ bụ arụpụtaghị. Ba ụba olu na-adabere na asọmpi na ojiji njikwa injinị na algọridim. Leadsbawanye ndu na-adabere na njikarịcha ntụgharị, onyinye, asọmpi na ihe ndị ọzọ - ọkachasị atụmanya ahụ. Ndị na-ege gị ntị na mgbasa ozi mmekọrịta na-egosi ikike na ikike ịkwalite ọdịnaya ahụ, mana ọzọ - ọ dabere na mgbanwe ndị ọzọ.
Anaghị m ekwu na metrik ndị a adịghị mkpa. Anyị na-enyocha ha niile. Ma, ihe m ga-ekwu bụ na m kwenyere na ndị na-ere ahịa ọdịnaya na-efu nnukwu, nnukwu, nnukwu, nnukwu ngwaahịa.
Ihe ntinye ederede ise n’izu ọ bụla ga-arụ ọrụ? Nke ahụ adabereghị na ugboro ole; ọ dabere na ọdịiche dị na ọdịnaya nke ị bipụtara na ọdịnaya nke ndị na-ege gị ntị na-achọ.
Kedu ụdị ọdịdị ala gị?
Mgbe ị na-elele ndị na-ege gị ntị anya, gịnị bụ isiokwu - nke metụtara ụlọ ọrụ gị - na ị nwere ike iwulite ikike ma dee ọdịnaya ga-enyere ha aka ịga nke ọma n'ọrụ ha na azụmaahịa ha? Ebe nrụọrụ gị na atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya anaghị akwụsị na ide banyere ngwaahịa na ọrụ gị… nke ahụ bụ obere opekata mpe. Ghọ ndị na - agụ akwụkwọ gị ihe bara uru ma wulite ntụkwasị obi na ikike iji nyere ha aka ịme nke ọma
Youmechala nyocha nke saịtị gị iji chọpụta ọtụtụ oge ọdịnaya ị nwere ike belata ma bulie, ma chọpụta ọdịiche dị na ọdịnaya ị na-edeghị banyere mkpa ahụ?
You mejuputara ụzọ iji tụọ mmetụta nke ọdịnaya na ntụgharị mgbanwe ka ị nwee ike ibute ụzọ melite ọdịnaya na nyocha gị ugbu a ma mepee ọdịnaya fọdụrụnụ?
Amaghị m na ị ga - enwe ike ịlele ọganiihu nke usoro azụmaahịa na - enweghị ntụle nke ọma gbasara odida obodo ịchọrọ ịtụ ikike na ya. Ọ na-enye aka ịghọta ọnụọgụ nke posts kwa izu iji dee ọ gwụla ma ị ghọtara ole posts ịchọrọ ị gafere. Ikekwe ọ dị mkpa ka ị dee ugboro atọ karịa ọtụtụ posts kwa izu iji nye iwu uto ị na-achọ na ụlọ ọrụ gị.
Kedu ka ị si eme atụmatụ na-enweghị ịkọwapụta ngwaahịa ikpeazụ?
Ihe omuma ga-emepe emepe a na-emepụta mgbakọ na-agbapụta taya ụbọchị niile ma na-atụ anya mezue ụgbọ ala. Offọdụ ajụjụ ndị a dị n’elu bụ maka mmeri agbụrụ ahụ… mana ị nweghị akụkụ ga-ezu iji nweta igwe na-agba ọsọ!
Biko echekwala m na m na-eme ka ihe a dị mfe. Ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya nke na-ewe ọtụtụ nyocha iji chọpụta ụtụ isi, njikarịcha na usoro nhazi usoro dị mkpa iji nwee ntakiri ngwaahịa nwere ike ire. Ọ bụghị ihe agaghị ekwe omume, mana o siri ike. Agbanyeghị, ozugbo ị matara ogo ngwaahịa a, ị nwere ike ịmalite ime ihe ọfụma karịa ma bulie ụfọdụ atụmanya nke nsonaazụ.
Tags: odida obodoibute ụzọ n'ime ọdịnayammepụta ọdịnayammepụta ọdịnaya dijitalụ